धनतेरसकाे दिन अनिवार्य घरमा ल्याउनुस यी ७ चीजहरू, जसले दिलाउनेछ लाभ ! - Sawal Nepal
धनतेरसकाे दिन अनिवार्य घरमा ल्याउनुस यी ७ चीजहरू, जसले दिलाउनेछ लाभ !
काठमाडाैं सवाल नेपाल २०७७ कार्तिक २१, २१:२६
यस पर्वमा यसरी नै किनमेल गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ कहिले र कसरी आरम्भ भयो भन्ने विषयमा कुनै निश्चित प्रमाण भने अहिले सम्म पत्ता लागिसकेको छैन। यद्दपी आयुर्वेदका ज्ञानी धन्वन्तरीको उत्पन्न समुद्रमन्थनबाट भएको थियो र उत्पन्न हुँदा उनले हातमा अमृतले भरिएको कलश लिएर प्रकट भएका थिए । जसका कारण यस दिनलाई भाँडाकुडा किनमेलका लागि शुभ मान्न थालिएको हो। यसैगरी यसदिन सुन, चाँदी, गहना र भाँडा किन्दा परिवारमा आउने सबै नकारात्मक शक्तिहरु हटेर जाने र परिवारको प्रत्येक सदस्यको लागि लाभदायक हुने विश्वास गरिन्छ।
जब मृत्युका देवता यम सर्पको रुपमा हिमाका छोरालाई डस्न आउछन् तब चारैतिर राखिएको चम्किला गहना र चम्किला बत्तिका कारण उनि कोठा भित्र प्रवेश गर्न सक्दैनन् । मृत्युका देवताले रातभर राजाकी पत्नीले राजालाई सुत्न नदिइ सुनाएका कथा सुनेर बस्छन र भोलिपल्ट यम राजाको ज्यान नलिई फर्कन्छन। तसर्थ, आजसम्म पनि यसदिन दुर्भाग्यबाट बच्न सुन र चाँदीको गहना वा नयाँ भाँडा किन्ने चलन छ । यसलाई समृद्धिको आश्रयस्थल पनि भनिन्छ। यद्यपि यस शुभ दिनम प्लास्टिकका समान भाडाकुडा तथा गिलास खरीद गर्न नहुने धार्मिक जनविश्वास छ।